Shirwaynihii 8aad Ee Xisbiga Iyo Xubnaha Loo Doortay Golaha Dhexe Ee XDSHSI. - Cakaara News
Fiiq(CN) Isniin.06.Oct.2014, Shirkan ayaa ahaa shirwaynihii 8aad ee xisbiga dimuqraadiga shacbiga soomaalida Itoobiya oo lagu qiimaynayay warbixintii u dhaxaysay labada shirwayne ee Birqod iyo Fiiq. Kadibna waxaa lagu ansixiyay warbixinadii iyo jihooyinkii siyaasadeed ee XDSHSI u yaalay.
Guud ahaan geedi socodka shirwaynaha ayaa ahaa mid waafaqsan xeer hoosaadka xisbiga iyo nidaamka dimuqraadiga ah. waxaa hoolka shirwaynahan 8aad kasoo qayb galay 2143 xubnood oo ay 543 kamidi ahaayeen xubnaha codka leh ee ay soo wakiisheen dhamaan 68 degmooyin, sagaalka gobol, iyo ismaamulada Diridhaba iyo Addis Ababa. Waxaa kaloo kasoo qayb galay wakiilada kasocday ururada bahwadaagta la ah XDSHSI oo uu ugu horeeyo ururka talada dalka haya ee EPRDF.
Hadaba Waxaa saaka hoolkii shirwaynaha 8aad ee kasocday magaalada Fiiq si habsami iyo sharciga waafaqsan uga dhacday doorashadii iyo cod bixintii xubnaha golaha dhexe ee xisbiga. Waxaana ladoortay 51 xubnood oo golaha dhexe ah kadib markii uu shirgudoonku si sharciga waafaqsan ugu dhawaaqay bilaabista cod bixinta xubnaha codka leh iyo nidaamkii doorashada.
51 xubnood ee golaha dhexe ayuu xisbigu doortay xilka muddo laba sano iyo badh, taaso noqonaysa wakhtiga shirwaynaha 9aad ee XDSHSI. Waxaana kamid ahaa magacda xubnaha loo doortay Golaha Dhexe 15 xubnood oo ay kujiraan hogaamintii islamarkaana ah gudigii fulinta, waana magacda hoos kuxusan:-
1-Gudoomiyaha xisbiga ahna afhayeenka baarlamanka DDSI mudane Maxamed Rashiid Isaaq.
2-Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar.
3-Kuxigeenka Madaxwaynaha DDSI ahna wasiirka Waxbarashada DDSI mudane Mawliid Haayir.
4-kuxigeenka madaxwaynaha DDSI ahna wasiirka Hor. magaalooyinka, dhis. warshadaha DDSI.
5-Madaxa xarunta dhexe ee XSHSI mudane Cabdicasiis Maxamed Cabdi.
6-Wasiirka Madaxtooyada DDSI mudane Axmed Maxamed Shugri.
7-Wasiirka Adeega Shacabka muadane Khadar Cabdi Ismaaciil.
8-Maareeyaha Wakaalada Jidadka DDSI marwo Sucaad Axmed Faarax.
9-Maajida Maxamed Maxamuud.
10-Gudoomiye kuxigeenka gobolka Liibaan mudane Maxamed Daahir.
11-Gudoomiyaha gobolka Jarar mudane Cabdi Jamaal Qaloonbi.
12-Gudoomiyaha gobolka Nogob mudane Cabdi Cali Mataan.
13-Gudoomiyaha gobolka Qoraxey mudane Yusuf Aadan Yusuf.
14-Mudane Aadan Kuusaw Cali.
15-Mudane Cumar Maxamed (Rooti).
kadib markii la dhameeyay warbixinadii, doorashadii xubnaha golaha dhexe, gudiga fulinta, gudiga dabagalka ee xisbiga ayaa sidoo kale waxaa kale oo laga hadlay go'aamada iyo qorshayaashii siyaasadeed ee xisbigu soo saaray. Guud ahaan geedi socodka shirwaynaha ayaa ahaa mid waafaqsan xeer hoosaadka iyo shuruucda XDSHSI.
Sidaad horeyba ula socoteen waxaa shirwaynahan kasoo qayb galay wakaailo kala duwan oo kasocday ururada bahwadaagta ee EPRDF iyo ururada Deegaanada dalka. Waxaa ururka EPRDF u hadlay mudane Amanuel Abaraham oo kasocday xarunta dhexe ee EPRDF kaasoo soo jeediyay khudbad taageero ah oo uu muujiyay sida uu ururkiisa uga go'antahay inuu taageero XDSHSI, wuxuuna aad u amaanay nidaamka dimuqraadiga iyo bisaylka siyaasadeed ee uu xisbigu gaadhay iyo guud ahaanba geedi socodka shirwaynaha 8aad bilow ilaa dhamaad, isagoo sheegay in isaga iyo ururkiisu lagarab taageero lagarab taaganyahay hirgalinta qorshayaasha kasoo baxay shirwaynaha.
Sidoo kale waxaa isaguna wakiilada kasoo qayb galay kamid ahaa wasiirka golaha wasiirada ee DFI mudane Eshatu Dhese oo hoosta kaxariiqay sida ay u dhacday doorashada xubnaha golaha dhexe, wuxuuna ku tilmaamay in ay xubnaha ladoortay gaar ahaan hogaaminta in ay yihiin kuwo ay kago'antahay awoodna u leh hirgalinta qorshaha siyaasadeed ee xisbiga.
Mar uu kahadlayay xaalada deegaanka ayuu sheegay in ay kajirto horumar iyo nabad galyo taam ah oo ay makhraati katahay isbadalka iyo horumarka kajira magaalda Fiiq oo 4 sano kahor ahayd meel uu nabadiidku baab'iyay balse maanta marti galisay shirwaynahii 8aad ee xisbiga.
Mudane Tawaldhe Berhe oo kasocday xarunta dhexe ee ururka TPLF ayaa isaguna amaanay isla markaana bogaadiyay habsami u socodkii nidaamka shirwaynaha. Waxay amaaneen sida ay xubnaha xisbigu isula halgameen una xaliyeen dhibaatooyinkii labadii bilood ee u danbaysay ee ay wadeen xubno kamida xisbiga iyo guud ahaanba go'aamadii kasoo baxay shirwaynaha.
Wakiiladii kasocday deegaanada Canfarta iyo Hararida oo iyaguna sidaas si lamida bogaadiyay go'aamadii shirka ayaa sidoo kale soo jeediyay khudbado dhaxal gal ah. Guud ahaan shirwaynaha ayaa kusoo dhamaaday jawi aad u qurux badan iyadoo aan hadii Eebe noo saamaxo aan dib idin kala soo socodsiin doono faah faahinada qaybihii kala duwanaa ee shirwaynaha.